Ny tetik'asa Tomorrowland an'ny Shanghai Disneyland dia hita eo amin'ny zoro atsimo andrefan'ny valan-javaboary. Mba hahavitana ao anatin'ny vanim-potoana fananganana nomanina, ny rindrina fizarazarana anatiny dia natao hamboarina amin'ny fotoana iray mandritra ny fametrahana MEP. Arak'izany, mandray ny volombatolantsika izahay ...
Mpanjifa maro no manontany ahy momba ny fitaovan'ny fenitra, ary ny namana maro izay mividy ny scaffold amin'ny ringlock dia tsy mahalala ny antony ampiasantsika ny Q355 (Q345) amin'ny safidin'ny fitaovan'ny fenitra, ary koa misy fenitra marobe miaraka amin'ny stamp vy Q355 voasokitra eny an-tsena, saingy afangaro amin'ny fitaovana Q235 ....
Casting kely, fahasamihafana lehibe! Nahoana isika no manizingizina ny hampiasa fitaratra fitaratra? (2)
Vaovao farany miresaka momba ny vidin'ny mpampitohy fitaratra rano dia in-2 noho ny mpampitohy ny fasika. Noho izany, mpiaramiasa maro no hahatsapa ho very hevitra, maninona isika no mbola misafidy ny fizotran'ny vera? Mamelà ahy hilaza aminao momba ny olan'ny mpampitohy fasika amina tsena ankehitriny: 01. Miseho ivelany mahantra T ...
Casting kely, fahasamihafana lehibe! Maninona isika no manizingizina ny hampiasa ny fizotran'ny vera? (1)
Ny fanariana dia ampahany amin'ny vidiny avo lenta amin'ny fitaovana fanaovana peratra Ringlock, ny kalitao dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fitoniana sy ny fiarovana ny node scaffold ary ny fiainam-panompoana an'io scaffold io, noho izany amin'ny safidintsika casting dia tokony hamafana ny masontsika koa isika. Androany dia te hiresaka momba ny ...
Tokony hasiana fongotra sy hongotana ao anaty lamina iray ny Scaffolding Ringlock. Misy ny olona mieritreritra fa ny fananganana dia mila tanterahina ao anaty filaminana, ary tsy maninona izany rehefa ravana, dia azo foanana tampoka, raha ny marina, ny fandravana ny scaffold koa dia takiana mba hanamafisana ny na ...
2021 Canton Fair Live stream an'ny indostrian'ny scaffold
Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd dia mandray anjara amin'ny 2021 Canton Fair Live Stream an'ny indostrian'ny scaffold amin'ny 04/15 / 2021-04 / 24/2021, tongasoa eto hitsidika ny trano heva misy anay. Ny tranokalan'ny mivantana mivantana dia https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-eae3-08d7ed79f5d1/ Wuxi Rapid ...
Ahoana ny fananganana sy fampiasana scaffolds azo antoka
Ilaina ny fikolokoloana amin'ny fikojakojana ny fananganana sy fananganana trano. Fampiasana tsara ny scaffolding mba hiantohana ny fiarovana anao sy ny olon-kafa. platfo ...
Fanofana Scaffolding vokatra Huaji Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Ny orinasa dia ao Wuxi, Jiangsu. Ny orinasa dia mizara roa, atrikasa famokarana ary fananganana birao. Ny haavon'ny rihana voalohany amin'ny atrikasa famokarana dia 10,95m. Ny haavon'ny haavon'ny trano biraon'ny 16.5m. Ny haavon'ny rafitra fanohanana formwork ho an'ny ...
Fomba hanatsarana ny fahalalanao fiarovana amin'ny scaffold mandritra ny fanidiana
Ny indostria rehetra eran'izao tontolo izao dia voan'ny areti-mifindra COVID-19, tsy ny indostrian'ny scaffolding ihany. Raha ny momba ny matihanina amin'ny scaffolda, na ny vao manomboka na ny efa za-draharaha, dia tena zava-dehibe ny fiofanana amin'ny dingana rehetra amin'ny kariera Scaffolders. Ny zava-misy ankehitriny dia misy ...